Bariituu Jaalataa Ahmad mana barnootaa Gaara Mul'ataatti ijaara jetti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Saayinsii Barnoota Bariituu Jaalataa Ahmad mana barnootaa Gaara Mul’ataatti ijaara jetti
Waa'een badhaasaa Bariituu, baay'inaafi maddi maallaqichaa oduu qeeqa heddu kaasee ta'eera
Bariituu Jaalataa Ahmad, umriin 14, woldorgommii sadarkaa idiladdunyaatti barattoota gola 8 jiddutti geggeeffame injifatte. Injifannoon isiin gonfatte kan maatii isiifi hunda keenya boonsu.
Gochi isii gaariin kuni barumsaan cimtuu taatee argamuu qofa irratti kan daangeffamee miti. ‘Maallaqa badhaasaa, isa woldorgommii injifachuu isiitiin argatte, doolaara Awustraaliyaa miliyoona 20 mana barnootatiin ijaaruuf murteessuu isiiti kan daran nama boonsu.’ Bariituu Jaalataa Ahmad mana barnootaa kan ijaartu Oromiyaa aanaa Gaara Mul’ataa keessatti.
Bariituu Jaalataa Ahmad maallaqicha badhaasaan osoo hintaane bifa gargaarsaatiin kan hawaasa Awustraaliyaa irraa wolitti qabade namoonni jedhan jiru. Ijoon dubbii asbiratti maallaqa meeqaafi eessaa argamee miti. Mataan dubbii, shamarri Oromoo tuni ijoollee Oromoo aanaa Gaara Mul’ataatti manni barnootaa irratti jigaaru irraa olqabuuf yaalii guddaa godhuu isiiti; isa kana kan dinqisiifatamuu qabu. Kadhaan argamsiistee, dorgommii injifattee badhaafamtee, waa’een madda maallaqichaa sa’aa kanatti qabxii hedduu wolnama dhabsiisuu qabuu miti. Kadhattees yoo fidde dinqisiifatamuu qabdi. Hedduun keenya maallaqa miliyoonatti laakkayamu [yoo dhugaa ta’e] kadhatanii argamsiisuun cimina akkam akka nama gaafatu beekna waan ta’eef. Essaayyuu haadhufuu, bifa kamiinuu haa argamuu, maallaqichi hangamuu haa ta’uu, dhuma irratti kan fayyadamaa ta’uuf deemu Oromoofi ijoollee isaati. Dhugatti manni barnootaa ijaarame taanaan.
Addaaddummaan yaadaa inni oduu Bariituutiin uumame akkauma jirutti ta’ee, dhugatti micayyoon tuni hawwiifi fedhii mana barnootaa naannoo Gaara Mul’ataatti ijaaruu qabdi taanaan waan jajjabeeffamuu qabuudha. Kaka’umsi akkanaa kuni, dhugatti jira taanaan, waan ijoollee Oromoo hundaaf fakkeenya gaarii ta’uu danda’uudha. Bariituu Jaalataa Ahmadiif gama hundaanuu milkaayina guddaa hawwina.
Oduun kuni irra deddeebi’amee gulaalameera. Dhuguaa dubbii kanaa baruuf yaaliin goonu akka itti fufetti.
aanaa gaara mul'ataa
Bariituu Jaalataa Ahmad
Previous articleBaqattoonni Itoophiyaa 101 gara Afrikaa Kibbaatti fuulleffatan Keeniyaa keessatti too’annaa jala oolan
Next articleZimbaabween baqattoota 179 gara Itoophiyaatti deebiste
mohammed gegali Mar 30, 2015 At 4:09 pm
kun wanta jejjebefaamu qabuu male yaada warra dhiphoota tauu addatti beekuun barbaachisadha